UMac Otakara uthi i-iPhone 7 ayizukunxibelelana ne-Smart | IPhone iindaba
UMac Otakara uthi i-iPhone 7 ayizukufumana isixhobo esiNxibelelanisayo
Phakathi kwamahemuhemu asixelela malunga ne-iPhone 7 ukuba iza kuba njani, omnye uqinisekisa ukuba iapile ye-apile elandelayo iyakubandakanya Isinxibelelanisi seSmart, Isinxibelelanisi esi-smart esiziswe ngu-Apple ecaleni kwe-12.9-intshi ye-iPad Pro ngo-Septemba ophelileyo. Namhlanje, iMac Otakara, indawo esele ivelise iinkcukacha ezininzi zeemveliso ze-Apple ngaphambili, uthi hayi, UTim Cook kunye nenkampani khange bacwangcise ukumilisela, ubuncinci kulo nyaka, i-iPhone ene-Smart Connector.
Isinxibelelanisi seSmart luhlobo olutsha lwezibuko elenzelwe dlulisa idatha kunye namandla ngaxeshanye, Ukuvumela, umzekelo, i-iPad Pro ukuba yazi ukuba ikhibhodi eyi-Smart kufuneka ihlaziywe kwaye yenze uhlaziyo ngaxeshanye nebhodi yezitshixo ifumana amandla kwi-iPad. Nguwuphi umsebenzi onokuqhagamshelwa ngeSmart kwi-iPhone? Inkolelo exhaphakileyo kukuba iya kusetyenziselwa ukugubungela kunye nezinye iintlobo zezinto ezifanelekileyo, kodwa mna andikaze ndicacelwe malunga nayo.
I-iPhone 7: Isinxibelelanisi esiSmart okanye akunjalo?
Ixesha lokuqala elathethwa ngalo i-iPhone 7 ene-Smart Connector, kungenxa yokuba umfanekiso wangaphambili wavela kwi-Intanethi. Kodwa lo mfanekiso yayingenguye wedwa ukubandakanya isinxibelelanisi esitsha, ukuba akunjalo sikwabona unikezelo oluthile (njengaleyo ikumfanekiso weheda) evela kumenzi wezincedisi ezazine-Apple's smart connector.
Ngokuka-Mac Otakara, iApple igqibe ekubeni ingabandakanyi iSinxibelelanisi seSmart kwi-iPhone 7 emva kokuvavanya ukufakwa kwayo, kodwa kunokwenzeka ukuba ngekhe bayithathele ingqalelo. Ukuba bebefanele ukusebenzisa esi sixhobo kwi-iPhone, bekuya kuba yinto eqhelekileyo ukuba ibonakaliswe kuqala kwi iPhone 7 Kwaye emva koko iya kubandakanywa kwi-iPad, njengoko benze ngezinye izinto ezinje ngeRetina Display, iSiri okanye iTouch ID.
Ucinga ntoni? Ngaba i-iPhone 7 iya kuba nesinxibelelanisi se-Smart okanye hayi? Ucinga ukuba yeyiphi into onokuyisebenzisa kwi-iPhone?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iifowuni zePhone » iPhone 7 » UMac Otakara uthi i-iPhone 7 ayizukufumana isixhobo esiNxibelelanisayo
I-TSMC iqukumbela uyilo lwe-A11. Iyakuba yi-10nm kwaye izakulunga ekuqaleni kuka-2017
Ukuqhagamshela kuya kuthatha indawo yesibini kwi-iOS 10